युवा, अवसर र समाज | eAdarsha.com
युवा, अवसर र समाज
अमेरिकाका ३२ औँ राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डी. रुजबेल्टले एउटा समारोहमा सम्बोधन गर्दै ‘हामीले युवाका लागि भविष्य बनाउन नसके पनि युवालाई भविष्यका लागि तयार गर्नु पर्छ’ भनेका थिए । रुजबेल्टले भनेको जस्तै के हाम्रा युवाहरू भविष्य सामना लागि तयार छन् त ? अहिले हाम्रा युवाहरूको अवस्था के छ ? युवाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा कत्तिको सचेत छन् ? यी आजका यक्ष प्रश्नहरू हुन् ।
सफल नेपाली युवाहरूको सूचीमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च श्रेणीमा पर्छन् । अहिले उनी तेस्रो पटक क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका छन् । भाद्र दुई गतेदेखि सुरु हुने सिपिएल खेल्न उनी कोरियन एयरको चार्टड जहाजमा गएका हुन् । सन् २०१६ मा राष्ट्रिय क्रिकेट टिम, २०१८ मा दिल्ली डेयर डेभिल्सबाट आइपिएल खेल्दै उनी सिपिएल खेल्न पुगेका हुन्। समयसँगै आफ्नो क्रिकेट करियरमा लामिछानेले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ ।
सगरमाथा र गौतम बुद्ध मात्र नभएर नेपाल सन्दीप लामिछानेको देश भनेर चिनिन थालेको छ । सन्दीप हरेक नेपालीको शान बनेका छन् । मेरा विचारमा चितवनमा हुँदा राजु खड्का जस्ता प्रशिक्षक, राष्ट्रिय टिममा हुँदा पारस खड्का जस्ता मार्गदर्शक, अस्ट्रेलिया हुँदा माइकल क्लर्क जस्ता उत्प्रेरक पाउनुका साथै आफूले पाएको अवसरको सही सदुपयोग गरेकाले उनी यो उचाइसम्म पुग्न सफल भएका हुन्। हामीसँग सन्दीप लामिछाने जस्ता दर्जनौँ क्रिकेटर भएको भए आज नेपाली क्रिकेट कहाँ पुग्थ्यो होला ?
मेरा विचारमा सन्दीप जस्ता क्रिकेटर, गौरिका सिंह जस्ता स्वीमर, अर्थर गन जस्ता गायक, आयुषी केसी जस्ता उद्यमीहरू दर्जनौँ संख्यामा हुने हो भने नेपालको शिर सगरमाथा जस्तै अग्लो हुन्थ्यो होला । कृषि, खेलकुद, उद्यमशीलता लगायत अन्य क्षेत्रमा हाम्रो सकारात्मक हस्तक्षेप हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना सबैलाई सही मार्गदर्शक, उत्प्रेरक र अवसर मिल्दैन । जस्ले गर्दा अधिकांश युवाहरूको प्रतिभा र सपना अर्थहीन बन्छन् । अब उप्रान्त युवाहरूले आफ्नो सपना र प्रतिभाको तिलाञ्जली दिन नपरोस् भनेर ‘युथ अपरचुनिटिज नेपाल’ (यु.अ नेपाल) ले नेपाल मै पहिलो पटक २५ वर्ष मुनिका २५ जना प्रतिभाशाली युवाहरूलाई सम्मान गरेको छ ।
सन् २०१८ देखि सञ्चालित यु.अ नेपाल ‘अनलाईन कम्युनिटी’ हो। आठ हजार बढी सदस्य भएको यस कम्युनिटीबाट ५०० बढी सदस्यले ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कसपमार्फत प्रत्यक्ष लाभ लिइसकेका छन् । सन् २०१८ मा बङ्गलादेश स्थित ‘युथ अपरचुनिटिज’ अनलाईन कम्युनिटीले ६० देशमा ब्रान्ड एम्बेसेडर छनौट गरी कार्य विस्तार गरेको थियो । उक्त समयमा तेज राज उप्रेतीको नेतृत्वमा नेपालमा ‘युथ अपरचुनिटिज नेपाल’ नाममा स्थापना भएको थियो ।
ब्रान्ड एम्बेसेडर भएका उप्रेतीले आफ्नो कार्यकालमा कलेजहरूमा एम्बेसेडर छनौट गर्नुका साथै सेमिनार ट्रेनिङलगायत अन्य थुप्रै कार्यक्रम गराएर युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य अगाडि बढाएका थिए। उप्रेतीको कार्यकाल पश्चात् हाल सागर कोइराला र ज्योति थापा यु.अ नेपालको एम्बेसेडर छन् । उप्रेती अहिले यु.अ नेपालको दक्षिण एसियाका अध्यक्ष छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित उप्रेतीले एम्बेसेडर ज्योति र सागरको साथमा प्रतिभाशाली नेपाली युवाहरूलाई पहिचान गरेर सम्मान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।
अगस्त १२ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा यु.अ नेपालले १६–२५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई सम्मान गरेको हो। अभियान, कृषि, शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा समाज र देशको हितमा काम गरेका युवाहरूलाई सम्मानित गरेको हो । यु.अ नेपालको दक्षिण एसियाका अध्यक्ष तेज राज उप्रेतीका अनुसार, ‘युवाहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै हौसला प्रदान गर्न उनीहरूलाई सम्मानित गरिएको हो’ ।
यु.अ नेपालको अनलाइन कम्युनिटीमार्फत् विभिन्न किसिमका अवसरहरू बारे सजिलै जान्न सकिन्छ । विगतमा यस कम्युनिटीबाट युवाहरूले सही अवसरहरू पहिचान गरेर लाभ लिइरहेका छन् । यु.अ नेपालले गर्दै आएको कार्य प्रशंसनीय छ । रुजबेल्टले भनेका जस्तै भविष्यका लागि युवाहरूलाई तयार पार्न यु.अ नेपालले आउने दिनमा अहम् भूमिका खेल्नेमा म विश्वस्त छु । मेरो विचारमा युवाहरूलाई सही मार्गदर्शन र अवसर दिने हो भने केही वर्षमा नै देशको राजनीतिक, आर्थिक कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा कायापलट हुने छ ।